WAR HADA SOO DHACAY: Khasaare xoogan oo la gaadhsiiyey ciidamada Somaliland & Dagaalkii Tukaraq oo askar Puntland ah lagu dhaawacay kadib markii….. – Puntlandtimes
WAR HADA SOO DHACAY: Khasaare xoogan oo la gaadhsiiyey ciidamada Somaliland & Dagaalkii Tukaraq oo askar Puntland ah lagu dhaawacay kadib markii…..
April 7, 2019 Abdurahmaan Editor
TUKARAQ(P-TIMES)- Faah faahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal saaka ka dhex maray ciidamada Puntland iyo Somaliland jiidaha hore ee deegaanka Tukaraq.
Dagaalkani oo yimid kadib markii yimid ciidamo ka tirsan Jabhadda xoreynta gobolka Sool ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada Somaliland ay ku leeyihiin duleedka deegaankaasi Tukaraq, waxaana dagaalkaasi oo socday muddo kooban la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan.
Inkastoo khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi aanan si dhab ah loo ogeyn ayaa waxaa la sheegay in ciidamada Somaliland laga gubay gaadiid dagaal khasaare xoogan la gaadhsiiyey sida ay sheegteen saraakiil u hadlay Jabhadda xoreynta gobolka Sool.
Ciidamada Somaliland oo ku gaashaaman gaadiidka dagaalka iyo hubka noocyadiisa kala duwan ayaa intaasi kadib saaka isku gadaamay saldhigii la wareeray habeenkii xalay ahayd, waxaana dagaal koobani uu ka dhex qarxay ciidamada Puntland iyo Somaliland kaas oo sababay dhaawaca labo askari oo ka tirsan ciidamada Puntland halka mid kalena uu ku naf waayey dagaalkaasi.
Ciidamada dagaalkani kaga dhintay Puntland ayaa ahaa ciidamo ka tirsan kuwa madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Karaash, waxaana dhanka Somaliland la sheegay in khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira la gaadhsiiyey intii uu socday dagaalkaasi.
Xiisadaha u dhaxaysa Puntland iyo Somaliland ee jiida Tukaraq ayaa saaka kacsan, waxaana xili walba qarxi kara dagaal hor leh.
Hadii uu dagaal ka dhaco nawaaxiga Tukaraq Gadhoowe ayaa u taag daran. Waayo halka ay iyagu gaadmo iyo ku dhufoo ka dhaqaaqda ay ku daawaha ugu wadaan, ciidamada Somaliland waxa ay karaan iney Gadhoowe ku duulaan oo ay qiyaamaha Caasimada Budhleyn kiciyaan. Laakiinse intiina badan ee Asxaabta asqeysan ee Reer Mirqaan Weyne Hartiga iskaga mataashaa kama war heysaan inaanu Somaliland ahaan aanaan jecley inaanu Gadhoowe ku duulno oonu baro kac ka bilawno. Waayo anagu waanu qadarinaa maamulada isku daya inay inay iyagu is maanacaan oo isa sanceeyaan.Maamulada isku daya iney is dabaraan. Budhleyna si ka waali ah ayay Somaliland ugu dayataa, laakiinse wey isku kaaya qaad qaadaa iyada oonan na qaadi karin. Sxbayaal Dhalfadayada ma qaadi kartaane aayar dib nooga yara daga inta aanaan idinku dul godhodhin? kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Waxan mararka Qarkood is irahda madaxweynaha somaliland Col.muuse Bixi maxa kakhaldan? maxa Dagalka galiyey? maxuu ka’fa’idaya Dagalka? so ma’oga konfurta somaliya waxa nafeyey in aay Dagaal tahay? ma wosan ka warqabin dhibatada Dagalku leyahay? magaran wayey col & abaar in aay ka dhalato dagalka muslinka? oo waliba Dariska ah?,madaxweynaha somaliland & golihisa wasirada iyo 2 Gole ee kala ah Golaha gurtida & Golaha wakilada intay shiran in aay iska dayan Aqondarada aan waxba uso kordhinan,folxumo & dhaqale burbur Col & abaar waxba laguma helo,sol & sanaag cidamada kala bax oo gurigina gadal ugu noqda wax horumar ah oo aad ka helaysan majiro,waxad ka heshan wa khasaro dhimasho dhawac burbur dhaqale Akhiro wa Roob la’aan biyo dhamis dhibato isugu jirta mid aduun & mid akhiro.
Asc Wr Wb Isaaq habeen iyo maalin waxaa uu ku hayaa Garoowe qabsanayaa war miyaadan ogayn in beesha ee degan yihiin Ciise Maxamuud Ciise dhuux, walee hadda hal taak soo qaadaan naagaa la idinka dhiganayaa ma waxaad moodeen majeerteen dhulbahante o aad isku direysaan, Adeer Meesha rag xaniinyo kuuskuusan jooga bal soo dhaqaajiya naagaa la idinka dhiganayaa. Waxaa kaloo usoo jeedinayaa Beesha dhulbahante dagaalka been beenta iska daaya, hal xabad tuura isku kaaya daaya iidoor iyo Majeerteebn, waxaa balan ah iidoor waa aqaan xabashi ayay usoo dacwoonayaan. Iidor af cagaar bal iskeena dagaalka, Garoowe Allah uunbaa qabsan karo, laakiin wagaashle sida Alle iiga adag yahay ayaa uga adkahaya.
waa lagu wareraya Jamaal Ali hadii loo jawabo qofkii riyodaba kan qoraya garowan qabsanaya waa shababkii laha tel aviv baan qabsanaya marka waxba
wakhti haysaga lumin waa hadal melegi galay dhulbahantena haduu kaco waa mawjado kacay isaaq waa og yihiin